Dufcadii 1aad Oo Ka Qalinjabisay Kuliyada Caafimaadka Ee Qabridahar - Cakaara News
Dufcadii 1aad Oo Ka Qalinjabisay Kuliyada Caafimaadka Ee Qabridahar
Qabridahar(Cakaaranews)Isniin, 22ka May 2017. Waxaa ka qalinjabiyay kuliyada caafimaadka ee magaalada qabridahar dufcadii 1aad oo ay tiradoodu dhan tahay 57 arday oo ay 27 hablo yihiin kuwaasi oo ku qalinjabiyay heerka dilomada muddo 3sanno ah bartayna waaxaha kaladuwn ee culuunta caafimaadka.
waxaana ka soo qaybgalay qalinjabinta xafladan masuuliyiin heer deegaan ah oo ay ka mid yihiin wasiirka xafiiska tababarada xirfadaha iyo farsamada DDSI mudane Naasir Ahmed, Wasiirka xafiiska arrimaha haweenka iyo caruurta DDSI marwo Raxma Maxamuud Haybe, masuuliyiinta gobolka qoraxey iyo kuwa mm qabridahar.
Hadaba qalinjabinta munaasabadan ayaa waxaa ugu horayn ka hadlay wasiirka xafiiska tababarada xirfadaha iyo farsamada DDSI mudane Naasir Ahmed oo sheegay inuu aad oogu faraxsanyahay qalinjabinta ardaydan 57 ah ee baratay culuumta caafimaadka islamarkaana ay tani kamid tahay guulaha ay xukuumadu ka gaadhay qaybaha waxbarashada. Wuxuuna wasiirku kula dardaarmay ardaydan ka qalinjabisay kuliyada caafimaadka ee mm qabridahar inay bulshada oogu adeegaan sidii loogu talagalay islamarkaana bulshada ka caawiyaan adeega dhanka caafimaaka.
Ugu Danbayna waxaa dhankooda ka hadlay qaar kamid ardadii qalinjabiyaasha ahaa oo sheegay inay aad oogu faraxsanyihiin qalinjabintan ay maanta ka qalinjabiyeen kuliyada caafimaadka ee mmq islamarkaana ay bulshada ugu adeegii doonaan sidii loogu talagalay kana caawin doonaan adeeyada caafimeed ee ay soo barteen.